မင်္ဂလာဇနီးမောင်နှံများအတွက် - U Hton Goldsmith & Jewellery
ရွှေဟန်းချိန်း ၊ Footchain
Posted by	U Hton Goldsmith
On မတ် 25, 2020
လက်ထပ်မင်္ဂလာပြုခြင်းသည် ချစ်သူနှစ်ဦး တစ်သက်တာပေါင်းသင်းဖို့ ရည်ရွယ်သောကြောင့် ဒီလိုအခမ်းအနားလေးမှာ အမှတ်တရရှိနေစေမည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လက်စွပ်လေးကို အပြန်အလှန်ဝတ်ဆင်ပေးကြလေ့ရှိပါတယ်။ လက်ထပ်လက်စွပ်ကို ဘယ်လက်ချောင်းမှာ ဝတ်ရမလဲဆိုတာကို ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုနှင့်တစ်ခု သတ်မှတ်ထားပုံခြင်း ကွာခြားပါသည်။ လက်ထပ်လက်စွပ်ဆိုသည်မှာ အချစ်ရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာ လက်ထပ်လက်စွပ်ကို မည့်သည်အချိန်မှစ၍ ဝတ်ဆင်ကြသည်ဆိုတာ မည်သူမှ အခိုင်အမာမပြောနိုင်ကြပေ။
စေ့စပ်လက်စွပ်နှင့် လက်ထပ်လက်စွပ်ကို တစ်သက်လုံးမခွဲဘူးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ များသောအားဖြင့် ဘယ်ဘက်လက်သန်းကြွယ်မှာ ဝတ်ဆင်တတ်ကြပါတယ်။ ရောမခေတ်တုန်းကဆိုလျှင် လူတွေယုံကြည်ထားတဲ့အရာက နှလုံးနှင့် သွေးပြန်ကြောတွေက တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နေပြီး ဘယ်ဘက်လက်သန်းကြွယ်ဆိုတာကလည်း နှလုံးနှင့် အနီးဆုံးနေရာမှာ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ထပ်လက်စွပ်နှင့် စေ့စပ်လက်စွပ်ကို ဘယ်ဘက်လက်သန်းကြွယ်မှာ ဝတ်ဆင်လေ့ရှိကြသည်။ နော်ဝေး၊ ရုရှား၊ ဂရိ၊ ယူကရိန်း၊ ပိုလန်၊ ဂျာမနီ၊ ပေါ်တူဂီနှင့် စပိန် စသောနိုင်ငံများသည် လက်ထပ်လက်စွပ်ကို ညာဘက်လက်သန်းကြွယ်မှာ ဝတ်ဆင်ပေးကြပြီး ဂျူးယဉ်ကျေးမှုအရဆိုလျှင် သတို့သားက သတို့သမီး၏လက်ညိုးမှာ ဝတ်ဆင်ပေးရသည်။
လက်ငါးချောင်းရှိသည့်အထဲမှ လက်ထပ်လက်စွပ်ကို ဘယ်ဘက်လက်သန်းကြွယ်မှာ ဝတ်ဆင်ပေးရခြင်းကလည်း အကြောင်းအရင်းရှိပါသည်။ လက်နှစ်ဖက်ကို ပူးလိုက်ပြီးလက်ခလယ်နှစ်ဖက်ကို ကွေးချပြီးရင် လက်ဆစ်ချင်း ထိကပ်ထားလိုက်ပါ။ ဘယ်ဘက်လက်မနှင့် ညာဘက်လက်မ လက်ထိပ်ချင်းပူးကပ်သွားသလို ကျန်လက်(၃)ချောင်းလည်း လက်ထိပ်ချင်းပူးကပ်သွားပါလိမ့်မည်။ လက်ဆစ်ခြင်းထိထားသည့် လက်ခလယ်တွေက မကွာဘဲနဲ့ လက်ထိပ်ချင်းပူးကပ်ထားတဲ့လက်ထိပ်လေးတွေကို ကပ်လိုက်ခွာလိုက်လုပ်ပေးရမည်။ အဲ့လိုလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာ ကျန်လက်ချောင်းများက ကပ်လိုက်ခွာလိုက်လုပ်လို့ရပေမယ့် ဘယ်လက်သန်းကြွယ်နှင့် ညာလက်သန်းကြွယ်ကတော့ ကပ်လိုက်ခွာလိုက်လုပ်လို့မရခြင်းဟာ လက်ငါးချောင်းမှာ သက်ဆိုင်ရာရည်ညွှန်းသူများရှိလို့ပါ။ ဘယ်လက်မနှင့် ညာလက်မသည် မိဘကိုရည်ညွှန်းသောကြောင့် အလွယ်တကူ ကပ်လိုက်ခွာလိုက်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ မိဘကို သားသမီးများက အချိန်တန်ရင် ခွဲခွာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘယ်လက်ညိုးနှင့် ညာလက်ညိုးသည် မောင်နှမကိုရည်ညွှန်းသောကြောင့် ကပ်လိုက်ခွာလိုက်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ မောင်နှမသားချင်းများကလည်း အချိန်တန်ရင်ခွဲခွာသွားတာပဲ။ ဘယ်လက်သန်းနှင့် ညာလက်သန်းသည် သားသမီးကိုရည်ညွှန်းသောကြောင့် ကပ်လိုက်ခွာလိုက်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ သားသမီးများကလည်း အချိန်တန်ရင်ခွဲခွာသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လက်ခလယ်ကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရည်ညွှန်းသောကြောင့် ထည့်မတွက်ပါ။ ကပ်လို့ရပြီး ခွဲလိုမရတဲ့ လက်သန်းကြွယ်လေးသည် ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလက်တွဲဖော်ကို ရည်ညွှန်းသောကြောင့် အတူတူရှိပြီးနောက်ပိုင်း ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်နဲ့မှ ခွဲမသွားဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လေးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် များသောအားဖြင့်‌ စေ့စပ်လက်စွပ်နှင့် လက်ထပ်လက်စွပ်ကို လက်သန်းကြွယ်မှာ ဝတ်ဆင်ကြပါသည်။
လက်သန်းကြွယ်မှာ လက်စွပ်ဝတ်ထားပြီဆိုရင် ပိုင်ဆိုင်သူဘဝလက်တွဲဖော်ရှိတယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်ဘက်လက်သန်းကြွယ်ရှိ သွေးလွှတ်ကြောသည် နှလုံးသားထဲကို တိုက်ရိုက်စီးဆင်းနေတဲ့အတွက် အသက်သွေးလွှတ်ကြောတွင် အချစ်တို့ဖြင့်ချည်နှောင်သည် (Vein Of Love) ဟု ယုံကြည်ပြီး ဝတ်ဆင်ကြပါတယ်။
စေ့စပ်လက်စွပ်ဆိုသည်မှာ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတဲ့အချိန်မှာပေးရသော လက်စွပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်စွပ်ပေးသောသူသည် သူ့၏နှလုံးသားနှင့် ဘဝတစ်ခုလုံးကို ကောင်မလေးအတွက် ပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ စေ့စပ်လက်စွပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ထပ်ခွင့်ကို လက်ခံသူအနေနဲ့လည်း ပိုင်ရှင်ရှိပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ စေ့စပ်လက်စွပ်ကို ဝတ်ဆင်ထားသည်။ စေ့စပ်လက်စွပ်တွေကို များသောအားဖြင့် ရွှေ၊ ပလက်တီနမ်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး စိန်တစ်ပွင့်ကိုသာ အသုံးပြုပြီး ဝတ်ဆင်လေ့ရှိပါတယ်။ လက်ထပ်လက်စွပ်သည် မင်္ဂလာဆောင်အတွင်းမှာ သတို့သားနှင့် သတို့သမီးအပြန်အလှန် (သို့မဟုတ်) လူကြီးမိဘများက ဝတ်ဆင်ပေးရသော လက်စွပ်ဖြစ်တယ်။ သတို့သမီးအများစုသည် စေ့စပ်လက်စွပ်နှင့် လက်ထပ်လက်စွပ် ဝတ်ဆင်ရသောနေရာခြင်းတူသောကြောင့် မင်္ဂလာဆောင်အတွင်းမှာ စေ့စပ်လက်စွပ်ကို ညာဘက်လက်သန်းကြွယ်မှာ ခဏပြောင်းဝတ်ထားပြီး ပြီးမှ ဘယ်ဘက်မှာနှစ်ခုပေါင်းဝတ်ထားကြပါသည်။ လက်ထပ်လက်စွပ်ကို များသောအားဖြင့် ရွှေနှင့်စိန်တွဲဖက်ထားသော ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းများကို ဝတ်ဆင်ကြသည်။
မင်္ဂလာလက်ထပ်လက်စွပ်ကို မောင်းကွင်းလေးတွေရွှေးချယ်ဝတ်ဆင်ခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်က မင်္ဂလာပွဲမှာ အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ အဆုံးအစမရှိချစ်ခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းသည့်အခါ စိန်လက်စွပ်လေးတွေ ရွေးချယ်စေချင်ပါသည်။ စိန်ဆိုတာ တန်ဖိုးရှိပြီး ပျက်စီးမလွယ်သောကြောင့် စိန်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ခိုင်းနှိုင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စေ့စပ်လက်စွပ်ကိုတော့ များသောအားဖြင့် စိန် ၁လုံး၊ ၃လုံး၊ ၅လုံး ကိုရွေးချယ်ကြသည်။ စိန် ၁လုံးက Love၊ စိန် ၃လုံးက I Love You၊ စိန် ၅လုံးက I Love You So Much အဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။ လက်ထပ်လက်စွပ်လေးကို ဆင်တူဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ပေါင်းစည်းခြင်းဆိုတဲ့ အမှတ်သင်္ကေတလေးဖြစ်လာပြီး ရာသက်ပန်ပေါင်းဖက်ဖို့အတွက် ကတိသစ္စာပြုရာတွင် ပိုမိုခိုင်မြဲမှုကို ဖြစ်စေပါသည်။
မင်္ဂလာဇနီးမောင်နှံတွေအတွက် အဓိပ္ပာယ်အပြည့်နက်ဆုံးသော အမှတ်တရတွေများထဲမှ လက်စွပ်ဟာ ပထမဦးစားပေး အမှတ်တရ ပစ္စည်းဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ လက်စွပ်သာမက အခြားသောအမှတ်တရဖြစ်စေမည့် ပစ္စည်းလေးတွေပေးခြင်းအားဖြင့် ဇနီးမောင်နှံအကြား အချစ်တွေပိုတိုးနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မင်္ဂလာလက်ဆောင်လေးတွေပေးရင်း မိမိတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာလေးတွေကို ပိုမိုခိုင်မြဲအောင် ချည်နှောင်လိုက်ကြပါနော် . . .
Newer ရွှေနဲ့ ပလက်တီနမ်တို့ကဘယ်လိုတွေ ကွာခြားတာလဲ?
Older လက်စွပ်လက်တိုင်း ဘယ်လိုတိုင်းမလဲ?